“Isagoo ah tababaraha xulka England ayuu taageerayay Talyaaniga.”. Rooney oo cambaareeyay Fabio Capello – Gool FM
“Isagoo ah tababaraha xulka England ayuu taageerayay Talyaaniga.”. Rooney oo cambaareeyay Fabio Capello
Byare September 3, 2017
(Europe) 03 Agoosto 2017. Kabtankii hore ee xulka Qaranka Ingiriiska balse iminka isaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah ee Wayne Rooney oo u sheekaynayay TalkSPORT ayaa daaha ka rogay arrin yaab leh.
Laacibkii hore ee Man United ayaa farta ku fiiqay in laga fiicnaa in Fabio Capello loo magacaabo tababaraha xulka lagu naaneyso Saddexda Libaax.
Macallinka reer Talyaani ayaa soo leyliyay Ingiriiska sanadihii u dhexeeyay 2008 ilaa 2012.
31 jirka weerarka kaga ciyaara Everton ayaa sidan ku bilaabay sheekadiisa:
“Sida cad. Luqadiisa Ingiriiska ma fiicneyd wuxuuna keensaday shaqaalo dhammaan Talyaani ah.
“Waan xusuustaa koobkii adduunka ee lagu qabtay South Africa, Fabio Capello iyo tababarayaashiisa waxay daawanayeen Talyaaniga oo ciyaaraya way bood boodayeen wayna sacbo tumayeen markii uu Talyaanigu gool dhaliyay.
“Wuxuu halkaa u joogay sida tababaraha xulka England, mana aaminsani inay saxnaayeen wixii uu sameeyay.’.
Wayne Rooney waa xiddiga ugu goolasha badan taariikhda xulka Ingiriiska 53-gool ayuu dhaliyay 119 kulan uu ka soo muuqday.
“Beenaalayaal Baad tihiin.”. Liverpool oo u jawaabtay Barcelona
“Ma uu Tuun dheere uga riday, mar uu dhulka dhigay iyo mar uu ka dul qaatay.”. Isco oo cashar u dhigay Verratti